प्रदेश २ Archives - Page3of5- inaruwaonline.com
वीरगन्ज – डेढ महिनापछि वीरगन्जमा सबै प्रकारका पसल खुलेका छन् । शुक्रबारबाट एकैपटक सबै पसल खुलेका हुन् । गएको भदौ १९ यता एक साइडमा पालो गर्दै खुल्न थालेका बजार क्षेत्रका पसल एकैपटक भने साउन १० यता बल्ल खुले । कोरोना महामारीको उच्च जोखिम बढेसँगै सुरुमा वीरगन्ज क्षेत्र र पछि जिल्लाभरिमा नै स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि आर्थिक नगरी वीरगन्जका पसल प्रायः सबै बन्द थिए । बजारका पसल सबै खुले ...
गौर - रौतहटका केही स्थानीय तहले सरुवा भएर आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर हुन दिँदैनन्। कतै भने दुईवटा स्थानीय तहमा एउटै कर्मचारीलाई प्रमुख र लेखा अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ। एउटै व्यक्ति फरकफरक पदमा दुई ठाउँको जिम्मेवारीमा बस्नु नैतिकताविपरीत भएको जानकार बताउँछन्। अधिकृत साहले दुवै तहमा काम गर्दै आएको स्वीकार गर्दै एउटा तहको जिम्मेवारी छाड्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। अधिकांश स्थानीय तहमा प्...
डा. सुजितको आत्महत्याले सहकर्मीहरु अचम्मित, “नेपालकै बिरामीको सेवा गर्ने सपना अधुरो”
मंगलबार डा. सुजितकुमार साहले आफू बस्ने क्वाटरको आठौँ तलाबाट हाम फालेर आत्महत्या गरेको खबर फैलियो। धेरैलाई पत्याउन गाह्रो भयो। कतिपयले डा. सुजित आत्महत्या गर्न सक्दैनन् भन्दै सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस राखे। कतिले घटनाको अनुसन्धान हुनुपर्ने माग राखिरहेका छन्। उसो त यो घटनाको अनुसन्धानको पाटोमा भारतीय प्रहरीले काम गरिरहेको छ। डा. सुजित चिकित्सा क्षेत्रमा चिरपरिचित नाम हो। उनी रोबोटिक कलेजो प्रत...
राजविराज – १३ वर्षीया मुनचुनकुमारी दासलाई उनकी आमाले बिहान सबेरै उठाउँछिन्। नुहाएर सफा कपडा लगाइदिएपछि नास्ता खुवाउँछिन्। त्यसपछि बिहान ७ बजे नजिकै ठाकुर बाबाको मन्दिरमा लगेर राख्छिन्। यो घटना सप्तरीस्थित दक्षिण–पश्चिमको बलान बिहुल गाउँपालिका–६ रौतहटको हो। प्राचीनकालका राजा ठाकुर बाबा नुहाउने भनिएको बडकी (ठूलो) पोखरीछेउ निर्मित मन्दिरमा सप्तरी र सिरहाका गाउँबाट भीड उर्लिन थालेको छ। उनीहरू देवीस्वर...